Boqorkii, ayaa maalintii danbe wuxuu u yeedhay wasiirii wasiiradiisa ugu sareeyay, waxaanu ku amray inuu habeen walba gabadh ugub ah oo uu guursado u keeno, sidii ayuu wasiirkii ku yeelay amarkii boqorka oo uu habeenkii ugu horeesay u keenay gabadh u gub ah oo aad iyo aad u quruxbadan. Boqorkii ayaa habeenkii gabadhii la aqal galay oo loo sameeyay aroosa aad u heersareeya. Markii wasiiradii waydiiyeen sababta uu gabadha u dilayna wuxuu yidhi " si aan gabadh kale oo danbe ii khiyaamin, habeen walba gabadh baan la aqal galayaa aroortiina waa in la dilaa" Hadana maalintii danbe ayaa gabadh kale loo keenay markaasuu habeenimadii la aqal galay, aroornimadiina sidii tii hore ayuu dil ugu xukumay. Markii u muddo sadex sanadood ah u waday, ayaa wadankii hablihii ugubka ahaa noqdeen wax la dilay iyo wax wadankii ka orday oo uu waalidkood la baxsaday. Maalintii danbe ayuu ninkii wasiirka ahaa uu magaaladii oo dhan ka soo waayay gabadh ugub ah oo uu u geeyo boqorka, isagoo aad u wareeraya oo ka baqanaya boqorka oo ku adkeeyay in hadii uu habeen qudha gabadh u keeni waayo in isna kurka laga goyn doono ayaa gurigiisi ku soo noqday wasiirku wuxuu dhalay laba hablood oo aad u quruxbadan oo la kala odhan jiray Sahrasaad iyo Dunyasaad , waxayna ahaayeen laba hablood oo aad u edeb badan, maskax iyo fahmona ilaahay ku manaystay , waxay ahaayeen laba gabdhood oo si fiican wax u bartay Gabadha wayn ee sahrasaad oo ku tukhusustay suugaan iyo luqadaha waxay haysay sheekooyin aad u badan.
Qisooyinka Kunhabeen iyo Habeen waxa loo isticmaalay aad iyo aad gaar ahaan waxaa laga qoray buug badan oo kuwa ciyaalka ah waxa kale oo laga sameeyaya Aflaam. Laakiin marka la eego Dhabahaan xiliga aytimi qisadani iyo sid ay kutimi may ahayn sidan ay hada inagusoo gaadhay. Talooyinka qudhoodu waxay isku dayaan inay xididadooda ku soo celiyaan carabiga, Giriigga, Hindi, Yuhuudda, Faaris iyo Turki Riwaayadda iyo suugaanta. A Thousand Tales wuxuu qayb ahaan ku tiirsanaa qaybaha Hindida.
Waa maxay caan ku ah dhamaan qeybaha kala duwan ee Nuuxku waa sheekadii ugu horreysay ee taliyaha Shahrullah iyo xaaskiisa Scheherazade iyo qalabkii feylka ahaa ee lagu dhex darey qorraxda oo dhan.
Sheekadu waxay ka socotaa sheekadan asalka ah; Qaar ka mid ah ayaa ku jira talooyin kale, halka kuwo kale ay bilaabaan oo ay ku dhammaanayaan heshiiskooda. Qaar ka mid ah daabacaadyada waxaa ku jira dhowr boqol oo habeen ah, halka qaar kalena ay ku jiraan 1, ama in ka badan.
Inta badan qoraalka ayaa ah qadar, inkastoo aaytani marmarka qaarkood loo isticmaalo heesaha iyo riddada iyo in lagu muujiyo dareen kacsan. Qaar badan oo ka mid ah gabayada waa hal xidhmo ama miisaan, laakiin inkastoo qaar ka mid ah ay sii dheeraanayaan.